NES ဂိမ်းများကို download လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးစာမျက်နှာ Androidsis
Francisco Ruiz | | စိတ်ကြွဆေး, Android ဂိမ်းများ, လဲ tutorial
ငါတက်သွား။ သင်တို့ရှိသမျှနှင့်အတူမျှဝေကတည်းက Android အတွက်ဒီ NES emulator ကို, ငါကွဲပြားခြားနားသောလူမှုကွန်ယက်များနှင့်။ မှတဆင့်မေးမြန်းချက်များနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများရပ်တန့်ကြပြီမဟုတ် Androidsis Telegram အုပ်စု, သင်သည်ငါ့ကိုအကြောင်းမေးသော အခမဲ့ NES ဂိမ်းများကို download လုပ်ရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစာမျက်နှာအချို့ ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ရိုးရှင်းသောထဲကအများဆုံးရရန် Android အတွက် NES emulator.
ကောင်းပြီ၊ ဒီ post မှာမင်းကိုနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ငါ့ဆီလာတဲ့မေးခွန်းတွေအားလုံးကိုပြန်ဖြေပေးမယ်။ ဒီနေ့ငါမင်းကိုတင်ပြမယ်။ NES ဂိမ်းများကိုအပြည့်အဝအခမဲ့နှင့်လုံလုံခြုံခြုံ download လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးစာမျက်နှာ အရာအပေါင်းတို့၏အရေးအပါဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျလိုလျှင် အခမဲ့ NES ဂိမ်းကို download လုပ်ပါ သင်၏ NES emulator ကိုအပြည့်အဝခံစားနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်ဒီမှာမျှဝေခဲ့သည့်သို့မဟုတ်သင်၏ Android တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်မည်သည့် NES အမျိုးအစားမဆို၊ သင်သာဒီဝဘ်စာမျက်နှာကိုသွားရပါလိမ့်မယ် နောက်ပြီးဒီဆောင်းပါးရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာဖော်ပြထားတဲ့အဆင့်တွေကိုလိုက်နာပါ။ အဲဒီမှာငါစာမျက်နှာကိုအသုံးပြုရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းကိုပြသပြီး၎င်းသည်မည်မျှကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပုံနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောကတ်တလောက်ကိုပြသရန်အခွင့်အလမ်းကိုယူသည်။ အတူတူရေတွက်ကြောင်းနှင့်အတူ NES ဂိမ်း၏။
၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သည်သင်ကြည့်ရှုနေသည့်စင်မြင့်နှင့်အလိုအလျောက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ဆိပ်ကမ်းများမှတိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းနှင့်မည်သည့်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်အခြားမတူညီသောစက်ပစ္စည်း၏အကူအညီမလိုအပ်ကြောင်းကိုသတိရပါ။ ဒီစာမျက်နှာသည် PC မှဖြစ်စေ၊ Android မှဖြစ်စေသင်ကစားသည့်ဂိမ်းများကိုမှန်ကန်သောပုံစံဖြင့်တိုက်ရိုက်ပေးလိမ့်မည်.
တစ်ချိန်က NesConsole ၏ပင်မစာမျက်နှာအတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့တွင် cheat နှင့်ကတ်ထူပြားမပါဘဲနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal ကိုအန္တရာယ်ပြုစရာမလိုဘဲလုံးဝအခမဲ့ download လုပ်ရန် NES ဂိမ်းအမြောက်အမြားရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။
၏အဓိကစာမျက်နှာနှင့်ဤပထမ ဦး ဆုံးအဆက်အသွယ်၌ NesConsoleဘယ်လိုကြည့်လို့ရတယ် ကျနော်တို့ကိုအက္ခရာစဉ်အတိုင်းဂိမ်းများကိုပြသထားတယ် ငါတို့ရှာနေတာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှာဖို့။ ရရှိနိုင်သည့်ခေါင်းစဉ်များစွာအကြားတွင်သင်ရှာဖွေလိုခြင်းမရှိသေးပါက ၀ ဘ်စာမျက်နှာစာမျက်နှာ၏ထိပ်ဆုံးရှိသော့ချက်စာလုံးများအားဖြင့်လည်းရှာဖွေမှုကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အမှန်တရားသည်လည်းအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့စိတ် ၀ င်စားသောဂိမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ၏ ၀ င်းဒိုးအသစ်သို့မဟုတ် tab အသစ်တွင်ဖွင့်ရန်၎င်း၏အမည်ကိုသာနှိပ်ရမည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားခြင်းနှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာ the ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သော NES ဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ခလုတ်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ.
Download ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးလျှင် ၁၀ စက္ကန့်သာကြော်ငြာသေးငယ်သည့် pop-up window အသစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့စောင့်ဆိုင်းရတော့မယ်ပေါ့.
ဒီစက္ကန့် (၁၀) ခုအကုန်တွင် screen ၏အလယ်တွင်မည်သည့်နေရာမှ link ကိုပြလိမ့်မည် ၎င်းကိုနှိပ်ရုံဖြင့်ယခင်ရွေးချယ်ထားသောဂိမ်းကိုစတင်ပါလိမ့်မည်.
၎င်းသည်စာအားဖြင့်ရှင်းလင်းစွာရှင်းပြရခက်သောဖြစ်စဉ်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်လုံးဝမဟုတ်ကြောင်းသင့်အားအာမခံနိုင်သဖြင့်အရောင်များကိုပြသရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤစာမူ၏အစတွင်သင့်အားထားခဲ့သည့်ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ငါမင်းကိုလိုက်နာဖို့ဖြစ်စဉ်ကိုပြသဘယ်မှာ သင်၏ကိုယ်ပိုင် Android terminal မှဤ NES ဂိမ်းအားလုံးကို download လုပ်ယူပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » စိတ်ကြွဆေး » NES ဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးစာမျက်နှာ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် Retro console ကို ၀ ယ်တော့မည်။ မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည်ဂိမ်းများနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အလုပ်လုပ်သည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းကကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းဖြစ်သည်။ သင်ကဒ်ပြားကိုထည့်သွင်းထားသောတီဗွီနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ
OnePlus သည် OnePlus5ပုံစံအသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။
ပျော်ရွှင်ပါစေနှင့် Emoji ရုပ်ရှင်၏တရားဝင်ဂိမ်းဖြစ်သော Emoji Challenge နှင့်လက်ဆောင်များရယူပါ